Laba looga shakisan yahay argagixisada Daesh oo lagu dilay mag... | Universal Somali TV
Laba looga shakisan yahay argagixisada Daesh oo lagu dilay magaalada caasimada ee Sacuudiga
January 08 2017 09:36:51
Laba looga shakisan yahay argagixisada Daesh ayaa lagu toogtay oo lagu dilay magaalada caasimada ee Saudi Arabia sida ay xaqiijiyeen Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Sida laga soo xigtay wasaaradda sabtidii , booliska ayaa toogtay tuhmanayaasha oo rasaas ku fureen islamarkaana dhaawaceen askari ka dib markii ay hareereeyeen ciidamada xaafada waqooyi ee Yaasmiin ee magaalada Riyadh .
"Ciidamada ammaanka waxay ku guuleeysteen inay dilaan nimanka la doonayay oo lagu magacaabo Taye bin 'San bin Yasrim al-Say'ari iyo Talal bin Samran al-Sa'aeidi ka dib markii ay diideen wicitaanada iyo dadaallada in ay isku dhiibaan ciidamada ammaanka," ayuu yiri Mansour al-Turki, afhayeenka wasaaradda.
Wasaaradda ayaa intaa ku daray in tuhmanayaasha ay ku hubeysnaayeen jaakadaha la isku qarxiyo, qoryaha iyo rasaas badan.Ka dib markii guryahooda la baadhay, waxaa sidoo kale laga helay qalabka lagu sameeyo bambooyinka.
Sanadkii la soo dhaafay, Saudi Arabia ayaa sheegay in ay fashiliyeen laba weerar oo ay qorsheeyeen kooxda Daesh islamarkaana ay doonayeen inay weeraraan garoonka kubadda cagta oo ay ka buuxaan dadka iyo inay dilaan tiro ka mid ah askarta bilayska.
Kan-xigaRuushka way ixtiraami doonaan Marayka...
Kan-horeDiblomaasi Israeli ah oo la duubay is...
31,968,342 unique visits